Iindleko zokuphila eUkraine abafundi zangaphandle
Iindleko abahlala Ukraine
Ukuze ufunde iindleko zokuphila Ukraine linyathelo kubalulekile ukuba bonke abafundi abasuka kumazwe angaphandle. Ukraine yenye lizwe ingenandleko yaseYurophu eyenza kube yenye yezona ndlela ilungileyo ukufunda aphesheya eYurophu. Kweli nqaku uya kufunda malunga ixabiso yokuhlala, uthutho, ukutya, ngelaphu kwaye ngokubanzi iindleko zokuphila Ukraine. Kwakhona uya kufunda ezimbalwa tips luncedo kubafundi foreing eUkraine. “EducationBro” Magazine zahlalutywa amaxabiso eUkraine thats ingxelo yethu:
Nceda qaphela: onke amaxabiso ezivakalayo July, 2016. Amaxabiso akungekwazeki ukutshintsha kakhulu kunyaka ozayo. Siya iliso nokuhlaziya, njengoko kufanelekile.
Imali kunye lwemali Ukraine
hryvnas Ukrainian. 500 kiang ( $ 20 iUSD ).
Ngaphambi kokuba uqalise ukuthetha amaxabiso, sifuna ukuxelela ntoni imali Ukraine.
imali wesizwe Ukrainian ihryvnia (kiang). 1 USD = 25 ihryvnia (rate iyahlozinga ngoku)
iminyaka Imali yesizwe Ukraine waphelelwa ngamandla ezimbalwa aho. Nangona le yingxaki enkulu kwilizwe, ukuba luncedo olukhulu abafundi zangaphandle. Ngoku ungafumana ngaphezulu imali efanayo ukuba wathabatha iidola USD nawe.
Ungakwazi ukuhlawula akwiidola okanye enye imali. Kuphela ihryvnia ivumela intlawulo. Yonke imali angaphandle zibe nokutshintshanisa kwiibhanki, ofisi exchange, kwizikhululo zikaloliwe kunye nezikhululo. Oku akuyongxaki. amasebe Bank aqhelekile. Siyaleza ukuba ukusebenzisa ofisi exchange kwisikhululo seenqwelo-moya. Izinga kuFeliks emasebeni Bank.
igumbi Ihostele kwiiyunivesithi Ukrainian (ezinye kwiiyunivesithi ibe namagumbi ngcono)
Phantse zonke iiyunivesithi eUkraine kwiihostele yayo. Abafundi International no kuphila apho. Ixabiso kwigumbi kwihostele iya kuba kwi $ 40 USD ukuba $ 100 iUSD. Xa eninzi Kwiimeko uza kuhlala khona 1 okanye 2 kwigumbi.
Abanye abafundi bakhetha ukuqesha igumbi. Kwezinye iimeko, ukuba bazikrazula tyaba izizwe ezimbalwa, kunokuba nenzuzo nto.
Uluhlu ixabiso kumagumbi iphezulu kakhulu. Oku kuxhomekeke umzi, ubungakanani igumbi nendawo esikuyo (iziko okanye zasedolophini).
kuba examle, uyakwazi wazikrazula 1 igumbi kuyinto $ 100 USD kude kwiziko. Okanye kwiziko kwizixeko ezincinane.
3 amagumbi tyaba uya kuhlawula $ 600 USD nangaphezulu. Indleko igumbi kuxhomekeke isimo sokulungisa kwinjoli nefanitshala. Siyaleza ngamandla abafundi ukuba ukhankanye ubukho ifanitshala phambi ukuqesha igumbi. Uninzi abafundi abahlala ehostele kunye ahlawule hayi ngaphezulu kwe $ 70 ngenyanga. Abo oqesha kwigumbi, badla angayihlawuli ngaphezu $ 150. konke kuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Izixeko ezininzi eninzi ke Uhambo, Odessa. Little ezibiza Lviv, neKharkiv, Dnipropetrovsk.
izixeko ezifana Kherson, Mykolaiv, Poltava, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi uya kuba zitshiphu imizi ngasentla.
Nebhasi e Kyïv.
Kwakhona nto ibalulekileyo yenkcitho. Ngesiqhelo, ukuba uhlala kwihostele zeyunivesithi, imi kufutshane yaye akuyomfuneko ukuba ukusebenzisa izithuthi ukufikelela ukufunda. kunjalo, Ufuna ukuya kwenye inxalenye yesixeko, ukuya kukuzonwabisa okanye zithi zijikeleze apha elizweni.
Ezothutho kwakhona kungabizi kakhulu Ukraine.
ndlela-One itikiti zezithuthi zengingqi (ibhasi, utramu, indlela engaphantsi, etrolo-bus, etc) uya kuhlawula $ 0.4 iUSD – $ 0.7 iUSD.
yokupasa ngenyanga ukuze sikaloliwe liqala ukususela $ 8 USD ukuba $ 12 iUSD (kukho ezimbalwa iiguqu wokupasa).
iteksi uya kuhlawula $ 2 – $ 3 USD kunye $ 0.45 USD ngenxa 1 km (liqala ukususela km 5)
ipetroli (1 ilitha) uya kuhlawula $ 0.85 – $ 1.05 iUSD
Auchan (neAshan) e Kyïv. Enye wevenkile uthandwa kakhulu Ukraine.
Ukraine ilizwe kwezolimo kunye kakhulu ngezithethe zokupheka. Qiniseka, ukuba uyafuna, uya kufunda lukhulu lwe iiresiphi umdla okunencasa. Apha, abantu abafane iyalele pizza ukutya okuphekwe ekhaya. Ngesiqhelo, ukuba uthenga iimveliso emalikeni okanye nakwiivenkile uze upheke ngayo themeselves ekhaya. Sikhuthaza abafundi ukuba benze okufanayo, yokuba ngokoqoqosho kakhulu nobanelisayo.
abantu basekuhlaleni badla uthenga ukutya kwiimarike. Iluncedo kakhulu, kodwa sicebisa abafundi ukuba zenjenjalo ngokukhawuleza. ngelishwa, awuzukuba amava ezaneleyo zokuhlala Ukraine, uyakwazi ukulunyukiswa emarikeni.
Kulungile ukusebenzisa kwiivenkile ezithengisa ezinkulu, apha ixabiso ezantsi ezivenkileni kulula kakhulu.
Uninzi kwiivenkile nabadumileyo:
Ni kubakhawulela ezindaweni.
Kulungile, ngoku amaxabiso:
Ubisi (1 ilitha) – $ 0.5 – $ 0.9 iUSD
White Isonka – $ 0.35 – $ 0.5 iUSD
irayisi (1ikg) – $ 0.8 – $ 1.1 iUSD
amaqanda Chicken (10) – $ 0.9 – $ 1 iUSD
Amazambane (1ikg) – $ 0.4 – $ 1 iUSD (kuxhomekeke ukusuka kwixesha lonyaka)
amanzi (1.5 ilitha kwibhotile) – $ 0.3 – $ 0.5 iUSD
Nentsuba yewayini (0.5 ilitha) – $ 5 – $ 25 iUSD
Ibhotile yebhiya (0.5 ilitha) – $ 0.4 – $ 1 iUSD.
Cigarettes (Malboro) – $ 1 iUSD.
Yinto kancinane inani iimveliso, kodwa ke sicinga ukuba ubone, ukuba amaxabiso aphantsi ngokwenene.
Ingongoma nicamanga. Asinako ukuba iimpahla asingobantu sitshiphu. Asiluthathi ingqalelo izinto bafakwe eninzi.
1 Kwijini kuqala $ 40 iUSD.
1 Summer isinxibo uqala kwi $ 40 iUSD.
1 ipere yezihlangu uqala $ 20 iUSD. izihlangu Good ukubaleka azikho zitshiphu $ 100
Zizonke iindleko zokuphila Ukraine ngenyanga
Kanjalo, sonke siyazi ukuba iindleko zokuphila ixhomekeke kumntu.
Umntu uhlala ngokuthozama phantse akachithi imali ukuzonwabisa, kwaye umntu usoloko uya ezili ezininzi kunxiba kunye namaqela.
Makhe sijonge la manani. Lo mvuzo uphantsi Ukraine, ngokomthetho, kuphela $ 62 iUSD. I-avareji somvuzo ugqirha IT – 325 iUSD ,lwempilo – $ 250, mntu waqala nje umsebenzi wakhe – 100-150 zeedola.
Ngoko ke, Unako bazive bekhululekile, inkcitho $ 200 ngenyanga (kuquka igumbi irente ehostele).
Ukuba ungamelana chitha $ 500 ngenyanga, unako ukuphila kwisakhiwo esikhulu, ukuthenga izinto ezahlukeneyo yaye ngokufuthi fun.
Nceda qaphela: imirhumo Universities yokufunda ayibandakanyi kulo iindleko.